🥇 Ukuphendula ngoxanduva
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 872
Ividiyo ye-accounting yomhambisi
Uku-odola ingxelo yomthumeli
Amalungiselelo yinkqubo entsonkothileyo nechitha ixesha, ebandakanya iinkampani ezininzi ezidityanisiweyo kunye namaqabane: abathengi, iiarhente zolwandle nolwandle, abathumeli bempahla, abathwali, abarhwebi, kunye nabanini bezithuthi. Xa unikezela ngeenkonzo zokuhanjiswa kwezinto, kubalulekile ukubeka esweni umsebenzi womntu ngamnye onoxanduva lokuqinisekisa umgangatho ophezulu wezothutho. Ukuphendula ngokuthumela imithwalo kuyakuvumela ukuba uqulunqe ulwazi malunga nabanikezeli beenkonzo kwaye ulawule umsebenzi kunye nabo, ngalo ndlela unegalelo ekuhleni ekubonakaleni kwazo zonke iinkqubo zamalungiselelo, ukuchongwa kwangethuba kweziphene kunye nophuhliso lwamanyathelo okuphucula. Inkqubo ye-USU-Soft yokuhambisa phambili ingxelo ikunika iseti yezixhobo ezahlukeneyo zokuphucula umbutho kunye nokwenza ishishini lakho liphumelele, kunye nokulungelelanisa iseti yeenkqubo zothutho kunye nokuphuhlisa ngokufanelekileyo ubudlelwane kunye nabathwali kunye nokwandisa ukhuphiswano.
Olona ncedo luphambili kunye numahluko phakathi kwesoftware kunye nenkqubo yesiqhelo ye-1C ngokungathandabuzekiyo kukuzenzekelayo kokusebenza kunye nokuphunyezwa kwawo ngokukhawuleza. Ukwenza ingxelo nge-USU-Soft ye-forwarder programme ivumela abasebenzisi ukuba bangene, bagcine kwaye bahlaziye ulwazi olubanzi malunga nabanikezeli beenkonzo zothutho, kubandakanya ulwazi loqhakamshelwano, amaxwebhu, kunye nokugcina ishedyuli yokuhlawula kunye nokujonga intlawulo. Uya kuwuxabisa umahluko phakathi kwenkqubo yethu yokuhambisa phambili ingxelo kunye nazo zonke ezinye iinkqubo, njengoko isoftware yethu inokuba bhetyebhetye kunye nokulula. Ikwanayo ujongano lwesitayile, kwaye ngayo ungonwabela ukusebenza ngokulula; iyazifanela nokubalula kweshishini kwaye inesakhiwo esilula nesiqondakalayo esineebhloko ezintathu. Icandelo leZalathiso ligama ledatha apho kulayishwa khona ulwazi xa kusenziwa imisebenzi ngendlela ezenzekelayo. Icandelo leeModyuli yindawo yokusebenza apho iingcali zinokwenza izicelo zothutho kunye nokuthenga izinto eziyimfuneko, ukuzoba iindlela kunye nokubala iinqwelomoya, kunye nokulandela umkhondo wecandelo ngalinye lendlela. Ibhloko yeengxelo ikuvumela ukuba uvelise kwaye ukhuphele iingxelo ezahlukeneyo zezemali kunye nezolawulo ngalo naliphi na ixesha elinikiweyo. Ubukhosi obunjalo bucace gca kwaye bulunge ngakumbi kunikaxanduva lwabathumeli bempahla kwiinkqubo ze-1C.
Ukongeza, umsebenzi wawo onke amasebe ungqanyaniswe nakwisibonelelo esinye. Abaphathi beenkonzo zabaThengi baya kuba nakho ukugcina idathabheyisi yabathengi, bayisebenzise ukuthumela iposi kunye nokubeka iliso kwimpumelelo yentengiso. Isebe lezokulungiselela lenza izicelo zokuqalisa inkqubo yezothutho kunye nokwenza izibalo eziyimfuneko. Isebe lezothutho liyakwazi ukubeka esweni imeko yezixhobo kwaye lilawule ukugqitywa kwangexesha lokugcinwa kwazo zonke izithuthi. Abaququzeleli banako ukulandela umkhondo ngokulula kunye nokumakisha ukuba inqanaba ngalinye lezothutho ngabahambisi liqhutywa njani. Abaphathi abaphezulu bafumana izixhobo ukulawula umsebenzi wawo onke amasebe kunye nokuhlalutya idatha efunyenweyo yokuphucula amanyathelo okuphucula ishishini. Ukwenza i-akhawunti yabathumeli beenkampani ukuvumela ukuba ususe iimeko zokuphumla ezingacwangciswanga, ukupaka kunye nenkcitho, kunye nokutshintsha iindlela ngokulula kwaye ukhuphe imiyalelo emitsha xa kukho imfuneko. Iinkonzo zonxibelelwano olukhawulezileyo nabathwali ngefowuni, iSMS kunye nemiyalezo ye-imeyile ziyafumaneka, eziphinda kwakhona zahlule isoftware yethu. Ukwenza ingxelo ngeenkonzo zothumelo-mthwalo kukuvumela ukuba urekhode eyona ndleko yenziwe ngumqhubi ngamnye kwaye ke uncede ukubala ngokuchanekileyo imali ehlawulwa ngumthengi ngamnye, kuthathelwa ingqalelo zonke iindleko.
Uvavanyo lokubandakanyeka kwesebe ngalinye elinoxanduva lunokwenzeka kwisicelo sobalo-mali, kunye nohlalutyo lwexesha elichithwe ekuvunyweni nasekuphuculeni umbutho womsebenzi. Ulwazi oluhlanganisiweyo kuwo onke amasebe kunye namacandelo eshishini luqokelelwa ngexesha, kunye nedatha kubo bonke ababoneleli beenkonzo kunye neendawo zokugcina iimpahla. Sinikezela ngenkqubo efanelekileyo yokunikwa kwengxelo yabadlulisi kwiinkampani ezinkulu nakumashishini amancinci ngenxa yokuba bhetyebhetye kuseto. Xa umqeshwa wakho efuna ukwenza umsebenzi, ufumana isaziso sokwenza njalo. Onke amaxwebhu aveliswa ngokuzenzekelayo, njengokuvunywa kwezothutho, amaphepha edatha yemoto kunye namaphepha esondlo. Inkqubo yokuphendula yabathumeli yenza zonke iinkqubo zibe lula kwaye zikhawuleze, kuthathelwa ingqalelo amakhadi amafutha anikezelwe abaqhubi, imigangatho yokusebenzisa amafutha, imayile ehleliweyo, ukutshintshwa kwangexesha kwencindi kunye nezahlulo. Umsebenzi ocacileyo wenkqubo yobalo kubadlulisi kukukwazi ukwenza iishedyuli zeveki zokulayisha kunye nokothula kumxholo wabathengi, abadlulisi, iindlela, amanqaku okushiya kunye neendawo. Umzobo ngamnye ubonisiwe kwaye ubonwe umzobo osebenzayo wenqwelomoya nganye: ngubani oyalele ukuthuthwa, ukulungela isithuthi, zeziphi iindawo zokuhambisa kunye nokuhambisa, owamkela umthwalo, nokuba intlawulo yenziwe na njalo njalo.
Ndiyabulela kwisicelo, ulawula ukufunyanwa kwentlawulo, ukuhamba kwemali kunye nolawulo lwamatyala. Ukuqhuba uhlalutyo olubanzi lwezemali kulula ukubulela kwiingxelo zobunzima obahlukeneyo, ukubonakaliswa kwedatha ngohlobo lweegrafu kunye nemizobo kwimeko yeendawo zeshishini, izithuthi, iindleko, njl. imisebenzi yenkampani. Ngokumalunga neempawu zokudityaniswa, isoftware inokudityaniswa kwiwebhusayithi yombutho wakho. Ukuba ufuna ukuvavanya intsebenzo yomqeshwa ngamnye, emva koko uphicothe abasebenzi ngesoftware, kunye nokufumana iingcali ezilungileyo kumbutho wakho. Ukuphuhlisa ubudlelwane nabathengi kunye nokugcina isiseko sedatha seCRM esigcweleyo, kunye nohlalutyo lokuqhuba kokusebenza kwabaphathi babathengi. Isakhono sokugcina itemplate yeekhontrakthi kunye namanye amaxwebhu yenza lula kwaye ikhawulezise inkqubo yokuyila kunye nokusayina iikhontrakthi.